Thu, May 26, 2022 | 13:16:20 NST
आँखा कमजोर भएको मान्छे विदेश जानको लागि मेडिकल अनफिट हुन्छ कि हुदैन?
प्रश्नः मेरो आँखा कमजोर छ। आँखा कमजोर भएको मान्छे विदेश जानको लागि मेडिकल अनफिट हुन्छ कि हुदैन? म -१.५ पावरको चस्मा लगाउछु। उत्तरः धर्म जी, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं मेडिकल व्यवसायी प्रविण तिवारीका अनुसार सेक्युरिटी गार्ड, लेवर लगायतका काममा आँखा कमजोर भएकाहरु अनफिट हुन्छन्। त्यसैले आँखा कमजोर भएकाहरु यी काममा जान पाउँदैनन्। तर कम्प्युटर सम्बन्धी काम, उद्योग मजदुर, सेल्सबोइ / गर्लका रुपमा भने आँखा कमजोर भएपनि चश्मा लगाएर रोजगारीका लागि विदेश जान सक्छन्। अथवा, घरभि...
मैले वैदेशिक रोजगार विभागबाट र इन्स्योरेन्सबाट पाउने सुबिधा पाउन सक्छु कि सक्दिन ?
प्रश्नः म मलेसियामा ३० महिनादेखि सडक दुर्घटनामा परि उपचार गराइरहेको छु। म १६ जुन २०१५ मा दुर्घटनामा परे। श्रम स्वीकृत १८ अगस्ट २०१५ मा र बिमा पनि उहीँ मितिमा सकिने थियो। अब म नेपाल आउन अझै १ बर्ष लाग्छ होला। के मैले वैदेशिक रोजगार विभागबाट र इन्स्योरेन्सबाट पाउने सुबिधा पाउन सक्छु कि सक्दिन ? मेरो घाँटी भाचिएको छ। टाउको र हात अलि अलि मात्र चल्छ। उत्तरः गोविन्द जी, श्रम स्वीकृति गरेपछि सम्झौता अवधिमा नै दुर्घटनामा परेकाले तपाईंले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। उपचार गराएको कागजात चाहिँ सुरक्षित राख्नु...
कुवेत जानको लागि पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ ?
प्रश्नः म कुवेत जाने प्रक्रियामा छु। अफर लेटर आइसक्यो, भिसाको प्रतिक्षामा छु। कुवेतको लागि पुलिस रिपोर्ट चाहिदैन रे भनेर सुनेको थिएँ, त्यसैले बुझाएको छैन। तर उज्यालो अनलाइनमा कुवेत जान पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने कुरा पढें। खासमा कुरा के हो ? उत्तरः निल जि, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङका अनुसार कुवेत जान पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ। रिपोर्ट नबुझाई तपाईंको भिसा लाग्दैन।...
रगतमा विलिरोविनको मात्रा तीन देखि चार एमजी भए वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइन्छ ?
प्रश्नः म वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छु। तर मेरो रगतमा विलिरोविनको मात्रा तीन देखि चार एमजी छ। अर्थात यसको मात्रा बढी हुनुलाई मेडिकल भाषामा जन्डिस भनिदो रहेछ। बाँकी रिपोर्ट सबै ठिक छ। डाक्टरले पनि सबै ठिकै छ, तर रोजगारीका लागि विदेश जानेहरु चाहिँ फिट हुन्छ कि हुन्न भन्ने हामीलाई थाहा हुन्न भन्छ। अब म विदेश जान सक्छु कि सक्दिन। अन्त्यमा पोर्चुगल, जापान, रसिया, युरोप जान खाडी मुलुकको जस्तो मेडिकल पास गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ कि छैन ? उत्तरः प्रकाश जी, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका केन्द्र...
चार वटा औंला छैन, ग्राफिक्स डिजाइनरमा विदेश जान पाउँछु कि पाउँदिन् ?
प्रश्नः मेरो देब्रे हातको चार वटा औंला छैन। म बिगत २/ ३ वर्ष बैंगलोर, इण्डियामा ग्राफिक्स डिजाइनरको काम गरेर हाल ६/७ वर्षदेखि नेपालमै पनि यही काम गरिरहेको छु। मैले दुवै हातले मज्जाले कम्प्युटर चलाउन सक्छु। अब म कतार, युएईजस्ता खाडीका देशहरुमा ग्राफिक्स डिजाइनरकै रुपमा काम गर्न जान पाउँछु कि पाउँदिन् ? उत्तर : नरेश गेलाल, महासचिव, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ– पहिलो कुरा त विदेशबाट माग आउनु पर्‍यो। माग आएकोबेला तपाईंले जाने चाहाना राख्नुभयो भने कम्पनीलाई यस्तो मान...
नेपाल फर्की भैसि पालन गर्न कती रकम सहयोग स्वरुप मिल्छ ? काहाँबाट त्यो रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ?
प्रश्नः म हाल जापानमा रहि , नेपालमा गएर गाई भैंसी पालन गर्ने सोचमा छु। यसको लागि सरकारी पक्षबाट मैले के सहयोग (अनुदान रकम) पाउन सक्छु ? हालको लागि सरदर १० वटा भैसि पालन गर्न कती रकम सहयोग स्वरुप मिल्छ ? र काहाँबाट त्यो रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ ? अनी १-२ महिने तालीम पनि लिन चाहान्छु। जानकारि पाए आभारी हुने थिएँ। उत्तरः कृष्णप्रसाद खनाल, निर्देशक, व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र - उहाँले बाहिरबाट आएर यहाँ व्यवसाय गर्ने सोच राख्नु भएको छ यो एकदमै राम्रो हो। उहाँका लागि मात्रै होइन ...
अजाद भिसा कस्तो भिसा हो ?
प्रश्नः अजाद भिसा कस्तो भिसा हो ? कानुनि मान्यता पाएको छ कि छैन ? अजाद भिसामा विदेश जाँदा कति पैसा लाग्छ ? यो भिसामा कतार र साउदिमा कति बर्ष को श्रम स्वीकृती हुन्छ ? उत्तरः मोहन अधिकारी, निर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग - आजाद भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको जानकारी हामीलाई पनि आएको छ। यसमा वैदेशिक रोजगार विभागको पनि कमजोरी भएको छ। तर यो भिसा छोटो समयको हुन्छ र रोजगारीमा जानेले यो भिसा पाउँदैनन्। आजात भिसामा गएर काम गर्नु हुँदैन।...
प्रश्नः विदेश पठाउने र काम नलगाउने म्यानपवारलाई के गर्नुपर्छ ? उत्तरः मोहन अधिकारी, निर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग - इजाजत प्राप्त म्यानपवार कम्पनीबाट विदेश गएको छ र विदेशमा काम पाएन भने त्यो मान्छेलाई फर्काएर ल्याउने काम म्यानपवार कम्पनीकै हो। जाँदा र फर्किंदा लागेको खर्च त्यो म्यानपवार कम्पनीलाई तिराउने काम वैदेशिक रोजगार विभागले गर्छ र गर्दै पनि आएको छ।
प्रश्नः पोर्चुगल जान कति खर्च लाक्छ होला ? नेपालीको लागि राम्रो छ कि छैन ? उत्तरः मोहन अधिकारी, निर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग - पोर्चुगल वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले खुल्ला गरेको देश हो। रोजगारीका लागि पोर्चुगल कामदार पठाउँदा सरकारले तोकेको लागत ८० हजार रुपैयाँ हो। यहाँ जानको लागि आधिकारीक म्यानपावर कम्पनी त्यसले ल्याएको डिमान्ड सहि छ कि छैन त्यो राम्रोसँग बुझेर मात्रै जान म सल्लाह दिन्छु।...
प्रश्नः रोजगारीका लागि साउदी जान भनेर प्रक्रिया अघि बढाएँ। मलाई म्यानपावर कम्पनीले अफर लेटर पनि देखायो। त्यसमा अफिस सेक्रेटरी लेखेको छ। तर मेडिकल गर्न जाँदा मलाई दिइएको काजगमा लेवरको भिसा भनेर लेखेको थियो। के मलाई झुक्याएर लेवरमा पठाउन लागिएको हो ? साउदी अरबको भिसा चेक गर्ने कुनै माध्यम छैन्? उत्तरः राजिव जी, साउदीबाट आउने ५० प्रतिशत कामदारको मागमा काम एउटा भनिएपनि अर्कै काम लेखिएको हुन्छ। किनभने साउदीमा अफिस सेक्रेटरी जस्ता काममा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैल...